7 Day Best Trips From Venice | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Day Best Trips From Venice
Sezvamunoziva zvose, Venice ndiye kupfuura guta yakatsarukanainokosha fadza yose Europe, kana kwete nyika. The vokuItaly vakariita zvachose kubva canal ndima diki, zvose izvo nhema pachitsuwa. Izvi yachinja kweguta rimwe zvikuru nzvimbo yakaisvonaka Europe. Asi isu tese kuti. Chii vazhinji havazivi ndechokuti pane zvakawanda kunze Venice. That is why we wanted to prepare a list of some of the best day trips from Venice. Iwe haungaiswi mwoyo chero nzvimbo idzi uye dzinoyevedza. saka, kana uchifarira kushanyira vamwe inofadza nzvimbo Via chitima, ngaarambe kuverenga 7 Day Best Trips From Venice In Italy!
1. Mumwe Of The Very Best Day Trips From Venice ndiye: Verona
Verona ndiye mumwe mashiripiti taundi riri vèneto nharaunda, Northern Italy vose vanoziva. Shakespeare akariita husingaperi kana akasarudza kushandisa nayo sezvo nzvimbo yake yakakurumbira Romeo uye Juliet mutambo. nhasi, guta kwakakurumbira chaizvo, uye ane kodzero.
Uchawana Verona zvikuru wakajeka, uye mumwe yakanakisisa dzokugara nokuti zuva rwokuparidza achibva Venice. Kana uchida kuenda ikoko nechitima, uchaona kuti kuva yakanakisisa uye inoita nezvechisarudzo kana kubva Venice.
Rimini para Verona Zvitima
Rome kuna Verona Zvitima
Florence kuna Verona Zvitima
Venice kuna Verona Zvitima
Vaya vanoda Italy vanoziva kuti Florence mumwe yakanakisisa nzvimbo kushanya. Zviri mumwe yakanakisisa dzokugara kunoshanyira mumwe zvizere zuva rwendo kubva Venice.
Vanhu vazhinji vanoguma akanganwa kuti vanogona kusvika kubva Venice nokuti zvishoma mberi kure. zvisinei, unogona kusvika Florence kubva Venice mumaawa maviri chete akatasva refu-nokukurumidza chitima. kuti nzira, nemiwo kuwana kuona vakawanda dzinokatyamadza nharaunda vakapararira munyika pakati Venice uye Florence.
Huru Zvinhu uchawana kuti noruzivo Florence dzinokwezva migwagwa uye nyika-mukurumbira Florence Cathedral kana Duomo kuita Firenze. Kana ukafunga kuti, Florence anova anokwezva rwendo vose vafambi.
3. Mumwe Of The Very Best Day Trips From Venice: Padua
Havasi vose anoziva pamusoro Padua (ChiItalian: Padova), asi harisati kuenda nokuda rimwe pamusoro zuva nzendo kubva Venice. Izvozvo nokuti guta rine zvose guta guru Italian anofanira kuva. Tagara kutaura chikafu chikuru, dzinokatyamadza akitekicha, uye zvinoshamisa piazzas.
Kubva Venice kuna Padua yakanakisisa kubudirira Via chitima sezvo vatasvi inoenda kuburikidza dzimwe hunoshamisa nzvimbo Italy. Plus, zviri ndiyewo hwomutambarakede uye uchitsanya pfungwa yauinayo.
Paunosvika Padua, Ita chokwadi iwe kushanyira Prato della Valle peguta. Zviri mumwe chikuru dzinoungana muguta, uye azere naka yakanyungudutswa munhu haagoni kufuratira.
Venice kuna Padua Zvitima
Lake Garda ndiye pakukura nyanza kuItaly. Uyewo chimwe chezvinhu nomukurumbira. Uye ane chikonzero chose kuti. Gungwa akapoteredzwa ose runako mamiriro anogona kupa. Uchawana magnolias, cypresses, ndimu miti, yemiorivhi nemiti, Dolomite makomo uye zvikuru saka zvakawanda kumativi Lake Garda.
Unogona kusvika maguta anoverengeka pamhenderekedzo gungwa Venice. zvisinei, tinonzwa kuti zvakanakisisa zuva nzendo kubva Venice kuna Lake Garda anofanira zvinosanganisira maguta Peschiera uye Sirmione. Kuti asvike uye Lake Garda, unogona kutora rimwe akawanda nezvitima kuti anosiya Venice ose zuva.
5. Mumwe Of The Very Best Day Trips From Venice: Siena
Havasi vose anoziva pamusoro Siena, asi hausi guta uchida shuva. Ndicho rine Tuscany uye zvikuru oga naka Ages dhorobha zvichakubatsira kuwana kuona.
The mutaundi duku, asi zvinonzi raizivikanwa cobbled migwagwa uye zvikuru chikuru pachivara rinozivikanwa Piazza del Campo. wo, kunoshamisa Magnia Tower pamire iroro sikweya, uye ndicho chirefu kupfuura mamiriro muchaona muna Siena.
The chitima tasva ndiyo zvishoma refu sezvo guta iri kure kure. zvisinei, sezvo Siena muduku, uchiri kukwanisa kuva zvinoshamisa zuva rwendo kubva Venice kana ukasarudza kuenda ikoko.
Venice kuna Siena Zvitima
Siena harisi guta chete kwazvo muna Tuscany. San Gimignano ndemumwewo. Vose vavo UNESCO nhaka nyika site, asi chete San Gimignano anogona ungazoshamisa iwe yayo skyline akaita Ages shongwe dzakawanda. It zvechokwadi pamberi kuona uye mumwe mukasakanganwa.
zvinotarisirwa, unogona kushanyira guta Via chitima sezvazvakaita nyore uye uchitsanya nzira kusvika nzvimbo kubva Venice. Chii chimwe, nemiwo kuwana kuona yekunwa chirefu Skyline kubva ichinyaradzwa ano Italian chitima.
Florence kuna San Gimignano Zvitima
Arezzo kuna San Gimignano Zvitima
Pisa kuna San Gimignano Zvitima
Venice kuna San Gimignano Zvitima
Trieste ndiro guru Friuli Venezia Giulia nharaunda uye nenhema riri pamuganhu reSlovenia. It ane ainyatsokwanisa muItaly yose uye kwave chikamu munyika padikidiki 70 makore. Nokuda ichi, Trieste ibhuku rakasiyana kunovhengana wokutevedzera dzakawanda dzokuEurope.
zvisinei, kuti kunovhengana ndiko kunoita chinokosha uye chinoshamisa nzvimbo kushanya. Unogona kusvika guta nyore Via chitima kubva Venice. Pataidzokera yose pfupi chaizvo, asi chinokosha ndechokuti traverses yakaisvonaka Italian pamhenderekedzo. Zvose izvozvo zvechokwadi anoita rakaisvonaka rwendo rimwe renyu zuva nzendo kubva Venice.
Venice kuna Trieste Zvitima
Rome kuna Trieste Zvitima
Milan kuna Trieste Zvitima
Florence kuna Trieste Zvitima
Key takeaways About Day Best Trips From Venice
Zvese muzvese, Venice iri ainyatsokwanisa. Unokwanisa akaenderei dzakawanda dzinonakidza dzakasiyana mhiri zvakawanda Italy nyore. Plus, kuti chete nzvimbo kunoita zvose izvi zuva nzendo kubva Venice uye zvakawanda.
Kana wagadzirira kutanga imwe adventures izvi, zvose zvaunofanira kuita tora chaunofarira rwendo. Zvino zvose zviri kuruboshwe kwauri kuita kuenda chitima chezvitima. Kana muine mibvunzo ipi yokuwedzera, inzwa wakasununguka kuonana Save A Train, uye tichafara kubatsira.
Unoda embed yedu Blog romukova “7 Day Best Trips From Venice In Italy” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-venice%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)